Indlela yokwenza iMemo yeMicrosoft Genie Chem
Ukulahla iikhemikhali kwiflask ukuvelisa ifu lomphunga wamanzi kunye ne-oksijeni, efana nomlingo genie ovela kwibhotile. Ukubonakaliswa koluphimatika kungasetyenziselwa ukuzisa iingcamango zokuphazamiseka komonakalo, ukuphendula okuphazamisayo , kunye neengcebiso .
Gqoka iiglavu zerabha kunye nezikhuselo zokhuseleko. I-30% ye-peroxide ye-hydrogen esetyenziswe kulo mboniso iyisimboli esomeleleyo esinokuthi iphathwe ngononophelo.
Kuyingozi kakhulu kwaye kuyasebenza. Iodide ye-ididedi ayifanele ingeniswa. Ukuphendula kwamakhemikhali kuguqulela ukushisa ngoko kubalulekile ukusebenzisa iglasi ye-borosilicate kunye nokunyamekela ukuba umlomo weflask ukhankanywe kubantu.
Magic Genie Ukubonisa Izinto
50 ml ye-30% ye- hydrogen peroxide (H 2 O 2 )
4 g yeodidium iodide, i-NaI [inokuthi ithathe indawo ye-manganese (IV) i-oxide]
I-1 litre yeborosilicate (iPrerex okanye iKimax) ibhola levolumetric
Iphepha lokucoca okanye iphepha lephepha
Isisombululo se-peroxide sinokugxininisa ngakumbi kune-peroxyde ejwayelekile yendlu (3%), ngoko kuya kufuneka ukuba ufumane ukufumaneka kwivenkile yokubonelela, ubugcini bemichiza okanye kwi-intanethi. Iodide ye-ididedi okanye i-manganese oxide ifunyenwe kakuhle kubathengisi beekhemikhali.
Inkqubo yeMicrosoft Genie
Gquba ididedi ye-ididedi okanye i-manganese oxide kwisiqwenga sephepha lokucoca okanye iphepha le-tissue. Ukutywala iphepha ukuze kungabikho nanye eqinile onokukhupha.
Ukunyathelisa ngokukhawuleza i-50 ml ye-30% ye-hydrogen peroxide isisombululo kwi-flask ye-volumetric.
Hlela i-flask counter kwaye uyigubungele ithawula ukukhusela izandla zakho ekushiseni kwempendulo. Xa ulungele, uphonsa ipakethe ye-reactant esisigxina kwi-flask. Qinisekisa ukuba i-flask icatshulwa kude nawe nabafundi. Umlingo wamanzi umphunga genie uya kuvela!
Emva kokuba umboniso uzalisekile, umbane unokuhlamba phantsi kwe-drain ngamanzi angaphezulu. Gcoba i-flask uze uhlaziye nasiphi na ukuchithelwa ngamanzi ngaphambi kokucoca.
IMicrosoft Genie Reaction
I-hydroxy peroxide iyanqumla kumphunga wamanzi kunye negesi ye-oksijini. Iodidi ye-ididedi okanye i-manganese oxide ivuselela ukusabela okubuhlungu. Impendulo yile:
2H 2 O 2 (aq) → 2H 2 O (g) + O 2 (g) + ubushushu
Iingcebiso ezifanelekileyo zovavanyo lwe-Magic Genie
Ukusetyenziswa kwePyrex, iKimax, okanye olunye uhlobo lweglasi ye-borosilicate kuyinciphisa umngcipheko wokuqhekeka.
Kunokuba ulahle ipakethi ye-iodide ye-sodium okanye i-manganese oxide, unokuyixhoma ngaphakathi kwebhola ngentambo ethintelwe ngaphandle kwebhola okanye ekhuselekile (ngokukhululeka) kunye nokuyeka. Musa ukutywina ngokuqinileyo i-flask! I-stopper enebhodi okanye ezimbini zikhuselekileyo.
Sebenzisa umbhobho omkhulu wevolumu, nangona usebenzisa kuphela umthamo omncinci wamanzi. Oku kungenxa yokuba umdaka obomvu ungasasaza kufuphi nesiphetho sempendulo. Olu lwakhiwo luyi-free iodine ekhutshwe kwi-oxyidizing effect ye-solution ye-peroxide.
Qinisekisa ukuba awuyitywina okanye ugxininise ngokukhawuleza i-flask, njengoko ukuxinzelelwa kwengcinezelo ukusuka kwisantya esingasemva kwexesha kunokusaphazamisa i-flask.
Ingaphezulu ye-ididedi ye-sodium ingaphoswa kwindawo yokungena.
Ngaba ubugcisa? Ungayifaka i-flask kwi-foil ukwenzela ukuba ibonakale njengebhotile yamageni okanye isibane.
Nangona ufumana i-peroxide engama-30%, kutheni ungazami ukubonakaliswa kwe- elephantpaste ye - elephant ?
Omnye umboniso othakazelisayo wokuzama uquka ukwenza umsi ococekileyo .
Imbekiselo: Ilitye, uCharles, uHJ Chem. Ed., 1944, 21, 300.
Indlela yokwenza i-Napalm yokuzenzela
Indlela Yokuguqula Amanzi Ngombane Wecala
Indlela yokwenza ingabonakali Ink
I-egg kwi-Soda: Umsebenzi wezeMpilo wamazinyo
I-Blue Borax Jewels kunye novavanyo lweBead
Quotes Birthday Birthday
Yintoni i-Ethnomethodology kwi-Sociology?
Ukubukela kokuqala: Ukusebenzisa i-Sonar ye-Wi-Fish Sonar nge-Smartphone
Isiqalo sokuqala: Ukusuka kwiNdawo zeNja kwiTesla
Iingcebiso zokufundisa isiNgesi ngegrama
Ngubani 'uAlice' ku 'Nice Putt, Alice'? Hamba u-Alliss
Ukuqhuba isikolo: Izibonelelo zabalawuli
Iimodyuli eziphambili ze-Skateboard
20 ye-Funniest Ugly Christmas Sweaters Ever Made
I-Qué es CBP, i-NVC yipel de Cortes y Embajada en asuntos migratorios
Ngokuphathelele Ukwakhiwa kweSkeletal
I-Revolutionary Apolinario Mabini
Iimpawu zoLwazi eziDumile kwiMbali yaseKhanada
I-SUNY I-Brockport Admissions Iimpawu kunye neenkalo
Ukusebenzisa iZiko elijolise kuyo ukuNcedisa ngegama
Biography ka-Antoni Gaudí
Iilwimi eziqhelekileyo: Ukudibanisa okulula
Iimbali zeGurdwaras zaseNankana, ePakistan
Umngcipheko wezeMpilo kwi-Popcorn
5 Iingxelo ze-Amazon ezikhohlakeleyo ngokupheleleyo (NSFW)
Amaqiniso NgamaBhrazi aseMerika aseMerika kunye nabemi baseArabhu